Yurub Archives • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Tags Qoraalada sumadeysan "Yurub"
Daroogadu waa dhibaato weyn oo ka jirta Yurub iyo adduunka oo dhan. Taasi waa sababta lacag badan lagu bixiyo la dagaallanka ganacsiga sharci darrada ah iyo iibinta daroogada: dagaalka ka dhanka ah daroogada. Inkasta oo lacagta faraha badan ee la galiyay, dambiyada iyo rabshadaha ka dhanka ah daroogooyinka ayaa sii kordhaya. Dekadaha Rotterdam iyo Antwerp ayaa ah marino waaweyn, kuwaas oo kumanaan kiilo oo daroogo ah ay sanad walba ka galaan Yurub. Kaliya qayb aad u yar oo tan ka mid ah ayaa kastamka dhexda. Taasi waa sababta koox sii kordheysa oo dadka Yurub ah ay u doodayaan sharciyeynta daroogooyinka, iyaga oo ka bilaabay xashiishadda iyo ecstasy. Nederlaan gudaheeda waxa jira tijaabo xashiishad ah kaas oo beerashada lagu oggol yahay shuruudo gaar ah. Luxembourg waa waddankii ugu horreeyay ee Yurub si buuxda u sharciyeeyay soo saarista, iibinta iyo isticmaalka xashiishadda ee isticmaalka madadaalada.
Yurub ayaa si isa soo taraysa u noqonaysa xudunta soo saarista iyo u gudbinta kookaynta…
Cawaaqibta murugada leh ee isticmaalka maandooriyaha sharci darrada ah ayaa laga yaabaa inay ka yara muuqato sidii hore,…
In ka badan kala badh dadka reer Yurub waxay taageeraan sharciyeynta xashiishadda
albaabka Ties Inc. April 7 2022
In ka badan kala bar dadka reer Yurub waxay taageeraan sharciyeynta isticmaalka…
Saamiyada & DhaqaalahacannabisCBDWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
albaabka Ties Inc. March 10 2022
Suuqa CBD ee Yurub ayaa kor u kacaya, laakiin macaamiisha runtii way garanayaan waxa ku jira alaabada…
albaabka Ties Inc. February 23 2022
Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in maxkamaddu ay hakisay hannaanka dimoqraadiyadda kadib 630.000 oo codsi…
Xashiishadu waxay aad ugu isticmaashaa Giriiga iyo wadamo ku yaala Koonfurta Yurub
albaabka Ties Inc. February 14 2022
Isticmaalka xashiishadda ee gobolka Giriigga ee Attica ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya Yurub. Athens…
albaabka Ties Inc. January 20 2022
Cannabis iyo hemp ayaa la isticmaali jiray qarniyo badan. Maanta, xashiishka ayaa si xawli ah ugu fidaya guud ahaan…
Malta waa waddankii ugu horreeyay ee Midowga Yurub ee sharciyeeyay beerashada xashiishadda guriga si loogu isticmaalo shakhsi ahaan
albaabka Ties Inc. December 16 2021
Wax badan baa ka dhashay. Dhammaan falaaraha waxay u muuqdeen kuwo ku wajahan Luxembourg. Ma jiraan wax ka yar…
Jarmalku waxa laga yaabaa inay maalmo uun ka fogaadaan ku dhawaaqida suuqa xashiishada ee madadaalada ee ugu weyn Yurub
albaabka daroogada November 18 2021
Dowladda Jarmalka ee dhiseysa isbaheysiga ayaa laga yaabaa inay maalmo ka harsan tahay ku dhawaaqista…
Luxembourg waxay noqon doontaa waddankii ugu horreeyay ee Yurub ah ee soo bandhiga beerashada iyo isticmaalka…
Tilray wuxuu ku fidiyay raadraaca xashiishadda caafimaadka ee Yurub
albaabka Ties Inc. 26 Oktoobar 2021
Tilray, Inc. (NASDAQ | TSX: TLRY), hormuudka caalamiga ah ee cilmi-baarista,…
Talyaanigu wuxuu qabanayaa afti ku saabsan go'aaminta xashiishadda
albaabka Ties Inc. 24 September 2021
Talyaanigu wuxuu go'aan ka gaari doonaa aftida sannadka soo socda in la baabi'iyo xashiishadda kadib…